Star City Galaxy Towerတွင်အခန်းရောင်းရန်ရှိသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10174330 အတွက် New Life Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🇲🇲🌲အလွှာနိမ့်၊ Garden View ကိုမြင်ရပြီး စိတ်အေးချမ်းသာစွာနေချင်သူများအတွက် အရောင်းအခန်းကောင်းလေးတစ်ခန်း တင်ပေးလိုက်ပါပြီ.. 🇲🇲🌲...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10167155 အတွက် Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Golden City Condo (2Bed) အလွှာမြင့် အရောင်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10068918 အတွက် Native Land Real Estate Agent သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Star City Condo(2Bed Room)(Open View) အရောင်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10134398 အတွက် Native Land Real Estate Agent သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Star City Condo မှ3bedroom ပြင်ဆင်ပြီးအခန်းသန့်ရောင်းရန်ရှိသည်။(ညှိနှိုင်း)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10194167 အတွက် Golden Myanmar Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09444474602, 09444474603, 092060003
City Loft Condo
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10193030 အတွက် သီရိကုဋေ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သန်လျင်၊ Star City Condo
1,860 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10191182 အတွက် Aung Myay (SAYTANAR) Real Estate & General Service သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Star City Condo အရောင်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10188277 အတွက် အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09420094681, 095043558, 09444337702, 09774665277
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10188086 အတွက် Aung Myay (SAYTANAR) Real Estate & General Service သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Star City Condo B Zone2Bedroom Ready to stay For Sale
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10182835 အတွက် Golden Myanmar Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Star City Condominium B Zone မှ ဈေးတန်အခန်းသန့် ရောင်းရန်ရှိသည်။(ညှိနှိုင်း)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10182509 အတွက် Golden Myanmar Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သန်လျင် City Loftအိမ်ရာရှိ ပရိဘောဂအပါ ကွန်ဒိုခန်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10176356 အတွက် Myanmar Ray Real Estate Agency သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်